University Of Teesside ဘွဲ့ဒီဂရီများအကြောင်း Open House Day ပြုလုပ်မည်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Teesside တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီတွေအကြောင်းကို အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်မယ့် Open House Day ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Kaplan Myanmar University College ( KMUC ) မှာ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်၊ စနေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့လယ် ၁ နာရီ အထိ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Teesside တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ဒီဂရီရယူရန် အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်တွေအကြောင်း၊ Diploma နဲ့ Advanced Diploma အဆင့် တက်ရောက်နိုင်တဲ့ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်တွေအကြောင်း၊ တက်ရောက်လိုတဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီမှာ ပါဝင်မယ့် ဘာသာရပ်အသေးစိတ်တွေ အကြောင်း၊ တက်ရောက်ရမယ့် ဘာသာရပ်အလိုက် ကျောင်းလခကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အရစ်ကျ ငွေပေးသွင်းမှုတွေအကြောင်း၊ ဘာသာရပ် ကင်းလွတ်ခွင့်တွေအကြောင်း နဲ့ KMUC မှာ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကို အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်မှာပါ။
Kaplan Myanmar University College မှာ အင်္ဂလန်Teesside တက္ကသိုလ်မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မယ့် BA (Hons) Business with International Management, BA (Hons) International Business with Marketing, BA (Hons) International Business with HR Management, BSc (Hons) Information Technology, MSc in Engineering Management စတဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကို တက်ရောက်ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲတက်ရောက်လိုသူတွေ အနေနဲ့ ဖုန်း – ၀၉၇၇၇၆၃၆၀၀၀ နဲ့ ၀၉ ၇၇၇၆၈၆၀၀၀ ကို ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Recommended for you - လေးစားခြင်း၏ ရလဒ်
Recommended for you - ဆယ်တန်းအပြင်ဖြေများအတွက် အခမဲ့ညကျောင်း ဖွင့်ပေးမည်
Read 232 times Last modified on Thursday, 11 October 2018 10:16
MBA ဟာ တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါရဲ့သလား?
ဘွဲ့ရပြီးတဲ့လူငယ်တိုင်း ခေါင်းခဲရတဲ့ပြဿနာ (၅)ခု
သင်က ဒိုင်ယာရီရေးတာ ဝါသနာပါတဲ့သူလား???
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ခံစားနေရပြီလား
လုပ်ရလွယ်ကူပြီး အကျိုးရှိစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ သိပြီးပြီလား???
EQ (Emotional intelligence) မြင့်တဲ့သူတစ်ယောက်မှာ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အကျင့် (၁၂) ခု